I-24 Bird Tattoos I-Ideal Design Idea Kwabesilisa Nabesifazane - Tattoos Art Ideas
I-24 Bird Tattoos I-Ideal Design Idea Kwabesilisa Nabafazi
i-sonitattoo July 15, 2016
Uke wabona cute tatto tattoos? Yebo unayo. Lezi zithombe ziyisifazane uma zisetshenziselwa abesifazane futhi zihle kakhulu ukubona.
Bird tattoo kusho
Izinyoni ziyaziwa ngokuthi izidalwa zamahhala eziyisizathu sokuthi kungani abantu abaningi beyiyinki. Kungabandakanya nezinto eziningi empilweni futhi yingakho ungathola amadoda nabesifazane abasebenzisa wona. Abanye abantu bahlobanisa i-tattoo ye -bird nobuhle, inkululeko, ukuthula, uthando, ulwazi, ukuqonda okuhlakaniphile, ubuhle, ubuhle, umndeni, umama, isiqondiso esingokomoya nokuningi.
Ama-tatto tattoos aklanyelwe ukubukeka epholile futhi engavamile ekwakheni nasebunzeni. Lesi esinye sezizathu zokuthi kungani abantu beyikhetha ngaphezu kwezinye izinto ezingu-#tattoo. Kukhona imiklamo ehlukahlukene yezinyoni zezinyoni ezinezincazelo ezahlukene. Nguwe okufanele unqume uhlobo lenyoni oludinga ukuba lunwe emzimbeni wakho. Izinyoni zifika ngobukhulu futhi zibunjwa futhi ngamunye wazo unokuthile okukhethekile ngabo. Abantu abanesithakazelo sokuthola inkululeko noma ukuzizwa bephila bangakwazi ukwenza lo mdwebo okhethekile we-tattoo. I-tattoo yezinyoni ingafakwa nganoma yikuphi ingxenye yomzimba ngaphandle kokuba ithole ukuthi ilahlekile futhi ingatshela izinto eziningi ngomuntu.
Izinyoni ziyaziwa njengezilwane ezithakazelisayo nezihle. Yonke imidwebo yezinyoni inezincazelo ezingokomfanekiso futhi abantu abaningi basebenzise njengabaxhumanisi phakathi kwabantu nabonkulunkulu. umthombo wesithombe
Singakutshela ukuthi yini enye yezinyoni zezinyoni ngaphambi kokuba ucabange ngokuzisebenzisa. I-Starrow Tattoo ingasetshenziselwa ukumelela isimo esingabalulekile nokuthobeka. I-Holy Bible yayisetshenziselwe ukumelela isizungu futhi yedwa. umthombo wesithombe
Kodwa-ke, uma kuJapane, limelela ukwethembeka ngenkathi ku-myths yesiGreki, lihlotshaniswa nokuzala futhi unkulunkulukazi u-Aphrodite. umthombo wesithombe
Uma ucabanga ngokuthola i-tattoo ye-Swallow, ukhuluma ngokuzala nokuphila okuvuselelwe. Kulabo abase-Afrika, umgogodla ubamele ukuhlanzeka ngenkathi labo baseChina bebona ama-swallows njengenjabulo yomshado. umthombo wesithombe
I-Tattoos Eyinqaba Yezinyoni Kuwe
Enye yezintandokazi zezinyoni ezithandwayo yi-Tattoo tattoo emele ukuhlanzeka, ubumnene, ukuthula kanye nokungabi namoya. Uma ubona amajuba amabili ahlangene, ungakhuluma ngokuthembeka nangothando lomshado. Kuthiwani ngezithombe ze-Swan? umthombo wesithombe
I-Swam imele ukuzithoba nokuthembela ngenkathi isiGreki, imelela unkulunkulukazi weVenus. Abantu abahamba ngama-stork tattoos, bafuna ukumela ukuzalwa nokusahlobo. umthombo wesithombe
I-parrot imelela ukuzala kanye nentwasahlobo futhi ithatha mayelana nokulingisa ngoba ama-parrots ayaziwa ukulingisa. Noma kunjalo, ama-parrot abhekwa ukuthi ahlotshaniswa nemvula, isiprofetho, uthando kanye ne-karma ku-Hinduism. umthombo wesithombe
E-China, i-Crane ingashiwo ukuthi ihlelwe kahle. Abanye bababiza ngokuthi abaphethe injabulo nothando noma izithunywa zawonkulunkulu. umthombo wesithombe
Ukuze uthole okuhle # ukubonisa tattoo yezinyoni yilokho okudingayo ukucabangela kuqala. Kufanele uqiniseke ukuthi ucabangele umdwebi wokudweba ozokwenza umdwebo kuwe. umthombo wesithombe
Ngemuva kokukwenza lokhu ungakhuluma ngomdwebi we-tattooist. Kukhona amawebhusayithi lapho ungathola khona i-tattooist enhle ngezintambo zakho zezinyoni. Okokugcina, udinga ukudweba kuleso sigaba somzimba ocabanga ukuthi uphelele ngethambo lakho lezinyoni. Yini ocabanga ngayo ngalezi zinyoni? umthombo wesithombe
Izinyoni ziyizidalwa ezithandekayo ezithande inhliziyo yethu uma sizibona. Singase singabi nethuba lokubona lezi zinyoni i-perch emzimbeni wethu kodwa sinelungelo lokuba nezingane zethu. I-tattoo yezinyoni isiye yathandwa inyoni yezinyoni ukuthi ubani ongayisebenzisa. umthombo wesithombe
Kunezinhlobo ezahlukene zezinyoni; izinyoni ezifuywayo nezilwane zasendle zazo zonke izinhlobo nezinsayizi. Inyoni ngayinye ibaluleke kakhulu ukuthi yisiphi isizathu okufanele siyiqaphele uhlobo lwezinyoni ze-tattoo esizozisebenzisa. umthombo wesithombe
Thatha isibonelo, isikhala noma igwavu liye lahlotshaniswa nomlingo omnyama nobuthakathi kuyilapho amajuba amhlophe eyaziwa ukuthi afanekisela ukuthula nokuhlanzeka. umthombo wesithombe
Kubalulekile ukuthi uqonde ukuthi inyoni ye-tattoo design ibalulekile. Kufanele uthathe isikhathi sethu ekusesheni ngokusebenzisa ikhathalogu ye-intanethi yezinyoni ngaphambi kokuba ukhethe ukukhetha kwakho. umthombo wesithombe
Isikhathi sokuqala okumelwe ukwenze ukuthola umculi we-tattoo ozokutshela lokho okukuyo. Kufanele ucabangele izimfanelo izinyoni ezithile ozikhethayo. umthombo wesithombe
Uma ubona ama-tattoos afana nalokhu, awukwazi ukukusiza kodwa uyibheke. Uma ungumuntu oyintombazane futhi ufuna lokho okuyinki ukuma yedwa futhi unamandla emphakathini, ungaya kulo mdwebo wezinyoni zezinyoni ophethe izimbali. umthombo wesithombe
AmaFaististas afunde ukuthatha imfashini ezingeni elilandelayo uma kuziwa ezithombeni zezinyoni. Ungenza umehluko uma ufuna ukuhamba nomklamo wezimbali uma unezinyoni ezinkulu ezimibalabala tattoo kanje. umthombo wesithombe
Uma ubona le tattoo, uzobathanda. Ubuhle bale tattoo bubenza kube kuhle kakhulu. Ungakhathazeki ngisho noma ungowesilisa ngoba umzimba wakho uzokwamukela lolu hlobo lokuklama. umthombo wesithombe
Akekho obona lolu hlobo lwe-tattoo futhi ngeke aluthande. Umbala obalabala we tattoo uyamangalisa futhi labo abawudwebayo ngabantu abanamehlo ngezinto ezinhle. umthombo wesithombe
Ungakwazi ukuhlangana nomdwebi wakho wokudweba ukukusiza wenze le tattoo enhle emzimbeni wakho. umthombo wesithombe
Uma uhlanganisa amagama nezinyoni ndawonye njengomdwebo, uzothola ubuciko obuhle njengale. Uthanda kanjani le tattoo? umthombo wesithombe
Chofoza lapha ukuze uthole ezinye izinkanyezi ze-Bird Tattoo
abangani bomngane abangcono kakhuluumculo womdweboamathumbu esifubangesandla izidakamizwadesign mehndiukubuyisa izithomberose tattoosama-tattoo kubantui-henna tattootattoo engapheliflower tattoosimibono ye-tattooama-tattoos engaloama-tattoo amahangeizithombe zezinyangauthando izithombetattoos eagleumdwebo wezindlovuI-Heart Tattoosi-cherry ehlobisa i-tattooumdwebo we-watercolori-octopus tattooI-Feather Tattooumdwebo womcibisholoamathrekhi we-butterflyama-cat tattoosTattoos yama-Ankleama-Tattoos amantombazanekoi fish tattootattoos zomqheleTattoos zeJomethrikhiimidwebo yamasleeimisindo yezintamboama-tattooukudubula izithombetattoos cutei-scorpion tattooizithombe zezingonyamaimibhangqwana emibhangqwanabird tattoosi-compass tattooizithombe zezinhlangaizinyawo zamathamboizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyeziangel tattoostattoos udadetattoo isolotus flower tattooidayimani tattooama-sun tattoos